အွန်လိုင်းသုံးသူများသိထားသင့်သောအချက်များ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
24-05-2011, 12:41 AM
ပို့စ် 44 ခုအတွက် 481 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် ဒီ topic အောက်မှာ ကျွန်တော် သိထားသမျှ အွန်လိုင်းသုံးသူများအတွက် အန္တရယ် ရှိတဲ့အချက်တွေနဲ့
ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်တွေကို ရေးဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး topic အသစ်ဖွင့်လိုက်တာပါ ။ topic ထပ်နေမှာလဲစိုးပါတယ်။ဒါပေ
မယ့် ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ အချက်လေးတွေပေါ်လာရင် ဒီအောက်မှာ အလွယ်တကူ ရေးလို့ရအောင်ရယ်၊ဖတ်သူတွေလဲ
စုစုဝေးဝေးလေးဖတ်လို့ ရအောင်ရယ်ဆိုပြီး ဖွင့်လိုက်တာပါ။topic ထပ်နေရင်လဲ ခွင့်လွတ်ပါ။မည်သူမဆိုသိသမျှ
fake login page လုပ်ပြီး password ကို ရယူတဲ့နည်းပါ ။ gmail password နဲ့ အခြား website password တွေ
ပျောက်ရခြင်းရဲ့ အဓိက တရားခံလို့ ပဲဆိုချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ သူကလုပ်ရတာလွယ်ပြီး password ရဖို့လဲသေ
ချာနေတာကိုးဗျ။အဲ..သူက internet knowledge အတော်အတန်ရှိထားတဲ့ လူတွေကိုတော့ လှည့်စားလို့ မရပါဘူး။
သူက မူလ website နဲ့ ခွဲမရအောင်တူတယ်ဗျာ။တူမှာပေါ့ဗျ....... မိမိ fake လုပ်ချင်တဲ့ site ကိုသွားပြီး right-click နှိပ်ပြီး view page source က ကုဒ်တွေယူပြီး notepad မှာထည့်ပြီး .html format နဲ့ ပြန် save ထားတာကိုးဗျ.... အဲ အလွယ်ဆုံးကတော့ save page as ဆိုတာနဲ့ web page တခုလုံးကို download ချလိုက်တာပါပဲ .. အဲမှာ image တွေပါပါတဲ့ အပြင် html file ပါပါတယ်လေ.... အဲဒါနဲ့ အတူ php နဲ့ရေးထားတဲ့ login form တခုကိုပါထည့်ပြီး host ပေါ်တင်လိုက်တာ..... web page အတုရဲ့ login action link နေရာမှာ ဒီ php ဖိုင်ကို ညွှ့န်းထားလိုက်တော့ user က login ဝင်လိုက်တာနဲ့ username နဲ့ password က text ဖိုင်တခုအနေနဲ့ မိမိ host က phishing page တင်ထားတဲ့ folder ထဲကို ရောက်လာပါလေရောဗျာ။
login ဝင်လိုက်ရင် gmail အစစ်လို login ဝင်မသွားပဲ ခဏ ပဲ loading ဖတ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါ
တယ်....သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုယ့် password က ပါသွားပြီလေ....တချို့ မသိတဲ့ သူတွေကျတော့
connection ကျတာပါလေဆိုပြီး web page ကို ပိတ်လိုက်တတ်တာလဲရှိပါတယ် ။
fake page ဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ????
အလွယ်လေးပါဗျာ...fake page ဆိုတာ သတိမရှိသူ၊ မသိသူတွေကိုပဲ လှည့်စားလို့ရတာပါ။ fake page ဆိုတာ ဘယ်လောက် မူလဆိုဒ်နဲ့တူအောင်လုပ်ထားလုပ်ထား link ကိုတော့တူအောင်လုပ်လို့မရပါဘူး ။
http://mail.goooogle.com ဆိုပြီး0လေးလုံးနဲ့ လုပ်ထားပေမယ့် မူလ https://mail.google.com ကိုတော့ တူအောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာသတိထားပါ ။။ ဒါကြောင့် login ဝင်တော့မယ်ဆိုရင် အမြဲ link ကိုစစ်
ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့။ http://mail.google.com လို့သုံးမယ်အစား http ရဲ့ နောက်မှာ s ထည့်ပြီး https://mail.google.com လို့အမြဲသုံးပါ .. ဒီlink ကို ဘယ် fake ကမှတူအောင်မတုနိုင်ပါဘူး .. internet
ပေါ်မှာ တူညီတဲ့ domain နှစ်ခုမရှိဘူးဆိုတာ အမြဲသိထားရပါမယ် ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်သုံးမယ့် site ရဲ့ link ဟာ
မှန်ရဲ့လားဆိုတာကို အမြဲ စစ်ဆေးကြပါ ။ မသင်္ကာရင် login မဝင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ....gtalk password ပျောက်မှာကြောက်တယ်လို့online က ကိုကိုမမတွေတွေ့ရင်အမြဲပြောပါတယ် .။ fake mail နဲ့ fake login ကလွဲပြီး တခြား ဘယ် software မှ သုံးပြီး မရနိုင်ပါဘူး
ကျွန်တော်မသိသေးတာလဲဖြစ်နိုင်တာပါပဲ...software ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်လဲ အစမ်းသပ်ခံကြည့်လိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဗျာ password ပါသွားတော့လဲ အေးတာပေါ့ software ကိုပြောတာနော်...တခြားသိထားသင့်တဲ့ နည်းတွေရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ဆက်လက်ရေးသားပါအုံးမယ်..
[COLOR="Green"][SIZE="3"]"I'm Freelance web developer"[/SIZE][/COLOR]
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ ihack83 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စိုးထက်, နန်းနွယ်, မျိုးဇင်, ရှင်းလေး, ဟိန်းသက်အောင်, ကျော်ထက်ချိန်, စောလွင်, bagothar85, Bayint Naung, bonge, cystee, g00gle, kowaiyan089, KznT, minthike, minthumon, mjkomg012@gmail.com, victor10, zo
Visit ihack83's homepage!
Find More Posts by ihack83
ပြန်စာ - အွန်လိုင်းသုံးသူများသိထားသင့်&#
ကျနော် သိသလောက် fake login တွေက ၂၄ နာရီဘဲ ခံတယ်ဗျ. webhosting တွေက သူတို့ ရဲ့စည်းကမ်းချက်နဲ့ မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီး အကောင့်ကိုပါ ပိတ်ပစ်တတ်ပါတယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ mg lin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရှင်းလေး, Bayint Naung, g00gle, htun30, ihack83, minthike
mg lin ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by mg lin
26-05-2011, 01:19 AM
အဲဒီ 24 နာရီလောက်ခံတာတောင် ဘယ်လောက် အန္တရယ်ရှိတယ်..ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားအသိဆုံးနေမှာပေါ့...ကိုလင်းရေ...ဟုတ်တယ်ဟုတ် security ပိုင်းကအသိလေးတွေလဲ မျှဝေပါအုံး...မျှော်နေမယ်နော် ( ချွန်လိုက်ပြီလို့ တော့မထင်ပါနဲ့ ... ပင့်လိုက်တာပါ )
အောက်က post လေးလဲဖတ်လိုက်အုံး ၊ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်လား မထင်ဘူးလား .... စောင့်နေမယ်နော်...firefox latest version တွေမှာတော့ ကျွန်တော်လဲ မစမ်းသပ်ကြည့်မိသေးပါဘူး ။
firefox မှာ site တခုကို login ဝင်လိုက်ရင် password ကို remember လုပ်မလားလို့ မေးတာ တွေ့ ကြမှာပါ ။ အဲလိုပေါ်လာရင်တော့ ဘာအကြောင်းလဲဗျာ။ not now ကိုနှိပ်ပြီး မမှတ်လိုက်ယုံပဲပေါ့။အဲ....အဲလိုမမေးပဲ ကိုယ်တောင်မသိလိုက်ပဲ auto save လုပ်လိုက်ရင်တော့ ခက်ပြီဗျာ။ကိုယ်သုံးပြီးလို့ပြန်သွားရင် ဆိုင်ကလူက အသာလေး tool >>security>>save password ထဲဝင်ကြည့်လိုက်ယုံပဲ။အဲလိုလုပ်လို့မရနိုင်ဘူးထင်နေသလား။မထင်နဲ့ဗျာ။အဲဒါ fire fox မှာပါတဲ့addon တခုပဲဗျ။
* _onFormSubmit() in nsLoginManager.js
* promptToSavePassword in nsLoginManagerPrompter.js
* _showSaveLoginNotification in nsLoginManagerPrompter.js
* addLogin in nsLoginManager.js
ဘယ်လိုပြင်ရမလဲလို့တော့မမေးနဲ့ဗျာ...ဒီမှာမပြောချင်ဘူး...တော်ကြာ internet ဆိုင်ကလူတွေ သိသွားမှဖြင့် ..:D
မသိလို့မဟုတ်ဘူးနော်....ကျွန်တော် js ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပါ့ဗျာ...အဲ..js ကိုနားလည်တဲ့သူတွေလဲ အဲဒီဖိုင်ကို notepad နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်လိုပြင်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိမှာအမှန်ပဲ... js crazy တွေကိုပြောတာနော်....
ဒီတော့ ကိုယ်ဘာမှ မသိသေးဘူးဆိုရင် ဆိုင်မှာ သုံးပြီးတဲ့အခါ firefox ရဲ့ tool>>option>>security>>save password အဲလို အဆင့်ဆင့်ဝင်ပြီး ကိုယ့် username password တွေ့ရင် ဖျက်ဖို့မမေ့နဲ့ပေါ့ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ ihack83 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရှင်းလေး, ဟိန်းသက်အောင်, ကျော်ထက်ချိန်, စောလွင်, မောင်ကြက်ခေါင်း, bagothar85, bonge, cystee, g00gle, htun30, kowaiyan089, KznT, minthike
ပြန်စာ - အွန်လိုင်းသုံးသူများသိထားသင့်&a
I believe that passwords would be encrypted. Isn't it?
The best ,especially if not using on your own computer, is to use incognito mode/private browsing.
Last edited by Bayint Naung; 26-05-2011 at 01:36 AM..
ရှင်းလေး, ဟိန်းသက်အောင်, g00gle, htun30, minthike